गर्भवती महिलाले एक दिनमा कति पानी पिउने ? « Nepal Health News
गर्भवती महिलाले एक दिनमा कति पानी पिउने ?
२०७६, १६ भाद्र सोमबार ११:४३ मा प्रकाशित
महिलाका लागि गर्भअवस्था निकै खुशी, महत्वपूर्ण तथा जटिल अवस्था हो । यो अवधिभर र बच्चा जन्मने समयमा गर्भवती महिला तथा पेटमा भएको बच्चाको स्वास्थ्यमा संकट आइपर्न सक्छ । विशेष गरी २० वर्षभन्दा कम अनि ३० वर्षपछि प्रथम पटक आमा बन्ने महिलामा यस्तो जोखिमको सम्भावना बढी देखा पर्ने हुन्छ । गर्भअवस्थामा रहेको शुरूका दिनहरूमा गर्भपतन हुने खतरा सबैभन्दा बढी हुन्छ ।
गर्भावस्थामा पहिलाभन्दा बढी पोषणको आवश्यकता हुन्छ । प्रोटिन, आइरनयुक्क्त खानेकुराहरु प्रसस्त मात्रामा खानुपर्छ । यसैले महिलाहरूले यस अवस्थामा आफ्नो जीवन शैली, खानपान को साथ पानीको पिउने मात्रालाई पनि निकै ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । आमाबाट बच्चामा पोषण जाने भएकोले आमाले आफ्नो शरीरको निकै ख्याल राख्न जरुरि देखिन्छ । गर्भवती महिलाले पहिलो महिनामा बिशेष ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ ।
पहिलो ४ हप्ता सम्म भ्रुण राम्रो विकाश हुन सकेन भने बच्चाको मानसिकबिकाशमा समस्या आउन सक्छ र बच्चा अस्वस्थ जन्मिन्छ । गर्भवती महिलाले एक दिनमा अरुको तुलनामा धेरै पानी पिउने गर्नु पर्छ । गर्भ अवस्थामा शरीरमा धेरै पसिना आउने भएकाले गर्भवती महिलाले एक दिनमा लगभग १० कप ( २.४ देखि ३ लीटर सम्म ) पानी पिउनु जरूरी देखिन्छ । पानी मात्र नभएर पानीको साथ साथ अरू झोल पदार्थहरुको सेवन पनि गर्नु पर्छ ।
यसले गर्भवती महिलाको साथै पेटमा भएको बच्चाको स्वास्थ्यलाई पनि फाइदा पुर्याउने हुन्छ । गर्भावस्थामा कम पानी पिउने महिलालाई विभिन्न किसिमको इन्फेक्सन, रोग तथा बच्चालाई समेत समस्या हुने सम्भावना बढी हुन्छ । गर्भावस्थाको पहिलो ३ महिनामा कम पानी पिउने महिलालाई बढी तनाव महसु हुने गर्छ । धेरै तनाव लिएको खण्डमा महिलाहरुलाई समय अगावै लेवर पेन हुन सक्छ ।
गर्भावस्थामा कम पानी पिउनाले गर्भवती महिलालाई भन्दा बढी उनको पेटमा रहेको बच्चालाई असर गर्छ । पेटमा भएको बच्चाको शारीरिक तथा मानसिक विकासमा कमि आउनुका साथै यस्तो अवस्थामा गर्भपतनको डर समेत हुने गर्छ । यसका साथै समय नपुग्दै बच्चा जन्मिन सक्छ । समय अगावै जन्मिएको बच्चाको स्वास्थ्यमा धेरै समस्याहरु देखिन थालिन्छ । गर्भावस्थामा कम मात्रामा पानी पिउनाले गर्भवती महिलाको शरीरको तापमान विग्रेर असन्तुलन हुन सक्छ ।
गर्भवती महिलाको शरीरले सामान्यतया अवस्थामा भन्दा बढी हिट प्रोड्युस गर्ने भएकोले यदि गर्भावस्थाको पहिलो ३ महिनामा गर्भवती महिलाको शरीरको तापमानलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिएन भने आमा तथा बच्चालाई समेत खतरा हुने सम्भावना बढ्दै जान्छ । त्यसैले गर्भअवस्थामा पानीको साथ साथै ताजा फलफूलको रस, दुध, तरकारीहरुको सुप, दाल पिउनु एकदमै राम्रो हुन्छ । गर्भावस्थामा बजारमा पानी फ्लेवर वाला जुसको सेवन गर्दा यसले गर्भमा रहेको बच्चालाई असर गर्न सक्छ । एजेन्सी
अस्वस्थकर खानपान र जीवनशैलीले हुन्छ महिनावारी गडबढी
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । ढल्किदो उमेरका महिला मात्र नभई किशोरीहरुमा पनि पछिल्लो समय महिनावारीमा गडबढी
राम्री देखिन माइक्रोब्लेडिङ
धेरै महिलाहरुलाई आँखी भौं पातलो हुनुको पीडा थाहा भएकै कुरा हो । आँखी भौं पातलो
स्तनको आकार र आकर्षण कसरी कायम राख्ने ?
तपाई आफ्नो स्तनको आकार सानो वा ठूलो भएर चिन्तित हुनुहुन्छ भने अब चिन्ता लिनु पर्दैन
स्तन क्यान्सर पत्ता लगाउन चिकित्सकभन्दा ‘एआई’ बढी प्रभावकारी
म्यामग्राम हेरेर स्तन क्यान्सर भएको पत्ता लगाउन चिकित्सकहरूभन्दा आर्टफिशल इन्टेलिजन्स (एआई) बढी प्रभावकारी हुने एउटा